Mon, May 25, 2020 at 12:18am
सांसदको हातमा विकास बजेटको ५%
काठमाडौँ, २१ जेठ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो । अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए । त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत भइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन..
बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी, कसरी चिन्ने सक्कली र नक्कली नोट ?
काठमाडौं, २० जेठ सामान्य अवस्थामा सक्कली र नक्कली नोट छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। नोटको गुणस्तर, छपाई तथा अरु विशेषताहरु उस्तै लागेपनि सक्कली नोटमा केही फरक खालका विशेषताहरु हुन्छन्। जुन नक्कली नोटमा हुँदैनन्। त्यस्ता विशेषताहरु आम मानिसले पनि ख्याल गर्यो भने भेटाउन सक्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नक्कली र सक्कली नोटमा रहेका सुरक्षण सम्बन्धी विशेषताहरु थाहा पाउने तरिकाका बारेमा यसरी सिकाएको छ। ..
बजेट विकासमुखी नभइ वितरणमुखी भएको विश्वप्रकाश शर्माको आरोप
बेझाड, २० जेठ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट विकासमुखी नभइ वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले ७० प्रतिशत बजेट चालु खर्चमा, ३० प्रतिशत बजेट मात्र विकास खर्चमा सरकारले विनियोजन गरेको बताउनुभयो । “यस्तो बजेटले देशको विकास हुँदैन”, पार्टी प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो । प्रतिपक्षको भूमिका..
वाणिज्य बैंकहरुले कति प्रतिशत ब्याजमा दिइरहेका छन् शेयर किन्न ऋण ?
काठमाडौं, १९ जेठ वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ आधार दर (बेस रेट) तय गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ बेस रेट अघिल्ला महिनाहरुमा भन्दा कम भएको देखिन्छ । तर बेस रेट घटे पनि सेयर कर्जाको प्रिमियम भने अझै उच्च देखिएको छ । बेस रेट घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको अनुभूति हुन नसकेको लगानीकर्ताहरु बताइरहेका..
‘छुट्याइएको छ दाम, अब गरौँ काम’
काठमाडौँ, १९ जेठ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ राजश्व र व्ययको बजेटको सत्तारूढ दलका सांसदले समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेट महत्वकाङ्क्षी र वितरणमुखी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक आव २०७६÷७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले बजेटको पक्ष र विपक्षमा मत जायर गरेका हुन् । आर्थिक समृद्धिको नारालाई..
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि परेको छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, १९ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उहाँले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क..
काठमाडौँ, १९ जेठ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ । यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हो । यसमा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन । हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको..
सर्तसहितको विदेशी सहायता अस्वीकार गरिने, यस्ता छन् ऋण लिन सक्ने क्षेत्रहरू
काठमाडौँ, १७ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी एवम् नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा पनि सर्त रहेको भए अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘यही जेठ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ पारित गरेको थियो । उक्त नीतिमा भौतिक पूर्वाधारको..
बजेट विश्लेषण : लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको सन्तुलित बजेट
काठमाडौँ, १७ जेठ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६-७७ का लागि बुधबार मुलुकको आयव्ययको विवरण अर्थात बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो । बजेटको आकार रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेको छ । गत वर्ष बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । बजेट आएपछि यस बजेटका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे विभिन्न चर्चा-परिचर्चा भइरहेका छन्..
Results 1658: You are at page 20 of 56